‘राम्राे’ सम्भावना बोकेका अधिकृतहरू चाँडै घर जाने डर « AayoMail
सशस्त्र प्रहरीमा बेथिति : १४ वर्षदेखि एउटै पदमा अधिकृतहरू
‘राम्राे’ सम्भावना बोकेका अधिकृतहरू चाँडै घर जाने डर
संगठनमा व्यापक निराशा र अराजकता
2021,7 September, 10:34 am
अस्तव्यस्त भइरहेको अर्धसैनिक संगठन सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। भावी महानिरीक्षक(आइजिपी)का रूपमा हेरिने प्रहरी अधिकृतहरू १४ वर्षदेखि बढुवा हुन सकेका छैनन्।
लामो समय बढुवा रोकिँदा त्यो बेला प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका कतिपय अधिकृतहरूले अब नायव उपरीक्षक(डिएसपी)मै अवकाश पाउने स्थिति छ।
‘करिअर’को वृत्तिविकासमा अवरोध भएपछि संगठनमा व्यापक निराशा र बेचैनी बढेको कतिपय प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। पुराना व्याचीहरूकै बढुवा नभएपछि पछिल्ला ब्याचमा पनि बढुवा हुन योग्यहरू त्यत्तिकै थुप्रिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ का अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवामा चारदेखि छ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका सबै दर्जा बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् र उनीहरूले त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँछन्।
लामोदेखि नेपाल प्रहरीमा सहायक निरीक्षक (असई) र नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भई आएका अधिकृतहरु उपरीक्षक (एसपी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बनिसक्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत इन्सपेक्टर भएकाहरू १५ वर्ष कटिसक्दा समेत डिएसपी बन्न सकेका छैनन्।
आईजीपी हुनेहरू डिएसपीमै अवकाश!
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट सेवामा प्रवेश गरेका कतिपय अधिकृतहरू आफूलाई भावी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने सपना बुनेका थिए। तर समयमै वृत्तिविकास नहुँदा एक तहमाथिको नायव उपरीक्षक (डिएसपी) मै अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका हरेक अधिकृतको सपना आइजिपीसम्मै हुन्छ। त्यसका लागि समय अविधिमै बढुवा अनि अन्य वृत्तिविकास हुन जरूरी छ। तर सशस्त्रमा यति धेरै बेथिति बढिसकेको छ कि त्यसलाई हटाउन माथिल्लो निकायका अधिकारीहरू नै असक्षम भइरहेका छन्।
‘यसले प्रहरीमा निराशा बढाएको छ। एउटा इन्स्पेक्टरमात्रै होइन, हरेक जवानलाई आफ्नो करिअरमा एक तह भएपनि बढुवा पाउने आश हुन्छ’ सशस्त्रका एकजना अधिकृत भन्छन् ‘तर १४-१५ वर्षदेखि न पुरानको बढुवा भएको छ न नयाँले पालो पाएका छन्। यसबाट धेरैमा निराशा बढेको छ। कतिले त जागिरै छोड्ने स्थितिमा पुगेका छन्।’
धेरै अधिकृतहरूको त एक तह बढुवाबिनै अवकासको समय आइसकेको छ।
दरबन्दी छैन् कसरी गर्ने बढुवा गर्ने?
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी राजु अर्याल बढुवा प्रक्रियाका बारेमा त्यति बोल्न चाहेनन्। आयोमेलको जिज्ञासामा उनले एकै शब्दमा जवाफ फर्काए– त्यस्तो केही छैन। बढुवा भइरहेको छ। तर भनेजति दरबन्दी नै छैन अनि बढुवा कहाँ गर्ने? यति भनेर उनले फोन काटिदिए र त्यसपछि सम्पर्कमै आउन चाहेनन्।
माथिल्लो तहमा केही दरबन्दी खाली भएपनि अहिलेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी) शैलेन्द्र खनालले पदपूर्तिका लागि कुनै पहलै गरेका छैनन्।
‘उनले केही गर्दैनन्। आफ्ना मान्छे, भनसुनका आधारमा मात्रै काम गर्छन्’ एकजना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत भन्छन् ‘जनशक्तिलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने? आफ्नो संगठनलाई कसरी बलियो र चेन अफकमाण्डमा लैजाने भन्ने केही छैन।’
ब्याच नं १ र २ का अधिकृतहरू मात्रै माथिल्लो नेतृत्वमा
अर्यालले भनेजस्तै दरबन्दी नै हुन नसके धेरै अधिकृतहरू डिएसपीबाटै बाहिरिनेछन्। ब्याच नं १ र २का अधिकृतहरूमात्रै माथिल्लो तहमा पुग्न पाउनेछन्। तर ३ देखि ७ नं ब्याचसम्मका धेरै अधिकृतहरू डिएसपी अनि एसपीबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
२६ कात्तिक २०५९ मा निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भएका ब्याच १ का ९ जना अहिले कायममुकायम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) छन्।
ब्याच नं १ को पाँच महिना पछि ७ चैत्र २०५९ मा भर्ना भएको सबै जना एसपी भइसकेका छन्। अब उनीहरुमध्ये अब आठ जना कामु एसएसपी बन्नेछन्।
तर ब्याच नं २ भन्दा ५ महिनापछि २९ साउन २०६० मा मात्रै भर्ना भएका ब्याच ३ का अधिकृतहरू कहिले एसपी हुने र कसरी बढुवा हुने त्यसको कुनै ठेगान छैन्।
ब्याच नं ३ मा ९६ जना पास आउट भए पनि अहिले ९० जना कार्यरत छन्। उनीहरु सेवामा प्रवेश गरेको नै १८ वर्ष पुगिसकेको छ। र त्यसबाट मुश्किले एकाध बढुवामा परेका छन्।
हाल सशस्त्रमा ब्याच नं ५ सम्मका इन्स्पेक्टर डिएसपी भइसकेका छन्। ब्याच ४ मा ९७ र ब्याच ५ मा ८९ जना सेवा प्रवेश गरेका थिए।
२०६२ फागुनमा भर्ना भएका ब्याच नं. ६ का प्रहरी निरीक्षकको सेवाअवधि १६ वर्ष लागिसकेको छ। तर भर्ना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि डिएसपी नै हुन सकेका छैनन्। जबकि सशस्त्रमा अहिले नै ६० जना डिएसपीको पद रिक्त छ।
ब्याच नं ६ मा अहिले ९३ जना छन्। उनीहरूबाट सबै जना अहिले बढुवामा पर्ने सम्भावना न्यून छ।
६ असार २०६४ मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका त्यो ब्याचमा १ सय ३१ जना छन्। तर उनीहरू कहिले डिएसपी बन्ने ठेगानै छैन्। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा अवकाश हुने बेला एक तह बढुवा हुन चार वा ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ, यस हिसाबले हेर्ने हो भने उनीहरु २५ देखि ३० वर्षसम्म मात्रै बढुवा हुनेछन्।
सशस्त्र प्रहरीको नियामवली अनुसार १८ देखि २० वर्षसम्म मात्रै सेवा अवधि(जागिर गर्ने समय) हुन्छ।
पछिलो समय भर्ना भएको अधिकृतहरू अर्थात ब्याच नं ६ भन्दा ब्याच ७ मा भर्ना भएका इन्सपेक्टर बढी मारमा पर्ने देखिन्छ।
बेथिति र बिसंगती बढ्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरीमा अहिले व्यापक असन्तुष्टि र निराशा बढ्न थालेको छ। लामो समयदेखि वृत्तिविकास हुन सकेको छैन भने बढुवाको प्रक्रिया रोकिँदा व्यापक निराशा छ।
संगठनमा चेन अफ कणमाण्ड भत्किएको छ। अराजकता यतिसम्म बढिसकेको छ कि एउटा जवानले आफूभन्दा माथिल्लो दर्जालाई समेत टेर्दैनन्।
‘चेन अफ कमाण्ड नराम्रोसँग भत्किन थालेको छ’ ती प्रहरी अधिकृत भन्छन् ‘कमाण्डरले नै भनेको मान्दैनन्। बरू जागिरै छोड्छु। मलाइ निकालिदिनुस् भन्छन्।’
उनका अनुसार यो सबै नेतृत्व तहले नै जन्माएको निराशा हो।
‘सिष्टमअनुसार सरासर काम हुने हो भने संगठन निकै चुस्त हुन्छ, चेन अफ कमाण्ड पनि बलियो हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘नत्र त यस्तै अराजकता बढ्ने हो। सरासर हुने काम पनि नेतृत्वले गर्न नसकेपछि हरेक संगठनको हालत यो भन्दा पनि अझ नराम्रो हुन्छ।’